Guardiola oo guushii xalay u hibeeyey siyaasiyinta gooni u goosadnimada Xukumadda Madrid ugu xiran – Gool FM
Guardiola oo guushii xalay u hibeeyey siyaasiyinta gooni u goosadnimada Xukumadda Madrid ugu xiran
Kaafi October 18, 2017
(Catalonia) 18 Oct 2018. Tababbaraha Manchester City Pep Guardiola waxa uu guushii xalay kooxdiisa 2-1 uga gaartay Napoli u hibeeyey hogaamiyeyaasha reer Catalonia ee u xir xiran gooni u goosadnimada.
“Tani iga ayaa loo hibeeyey,” ayuu Guardiola u sheegay wariyeyaasha, isaga oo ka jawaabaya su’aal arintaas laga weydiiyey.
“Waxaan ku muujinay Catalonia in wadiniyadda ay ka weyntahay aragtida noocey doonto ha ahaate. Waxaan rajeynayaa in dhawaan la soo daayo.”
Kumanaan dad ah ayaa jidadka isugu soo baxay salaasadii Barcelona iyaga oo Madrid ku mudaharaadayey sababo la xiriira xirnaanshaha Jordi Cuixart iyo Jordi Sanchez oo loo haysto eedemo la xiriira gooni u goosadnimo.
Arintan waxa ay ka dambeeysay aftidii sida adag loogu loolamay.
Guardiola, oo ka soo jeeda Catalinia waxa uu ka mid yahay dadka ugu caansan Barcelona Football Club isaga oo kula guuleystay tiro badan oo koobab ah ciyaaryahan iyo tabbare ahaanba.
David Luiz oo ka Tacsiyadeeyay Xasuuqii ka dhacay Muqdisho/Zope
Muran xoogan oo xalay dhex maray De Bruyne, Silva iyo Fernandinho…(Maxaa la isku qabtay??)